जेबिल्स फाइनान्सको १००% हकप्रद खुला, फारम भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » जेबिल्स फाइनान्सको १००% हकप्रद खुला, फारम भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - जेबिल्स फाइनान्सको आइतबारदेखि १००% हकप्रद सेयर बिक्री खुला भएको छ । जेबिल्सले १ः१ को अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २८ लाख ८९ हजार ५६२.५० कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । यो हकप्रद सेयर कात्तिक ५ गतेसम्म भर्न पाइनेछ । यसमा भदौ १२ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हाल जेबिल्सको चुक्ता पुँजी २८ करोड ८९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद निष्कासनपछि भने जेबिल्सको चुक्ता पुँजी ५७ करोड ७९ लाख १२ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ । फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ३ करोड ६२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जेबिल्सको प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ ५५ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ भने १२७ रुपैयाँ २६ पैसा छ ।
लगानीकर्ताले सनराइज क्यापिटल लिमिटेड कमलपोखरी काठमाडौं र जेबिल्स फाइनान्सको मुख्य कार्यालय न्यूरोड काठमाडौबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, सनराइज बैंकका विराटनगर, पोखरा, वीरगंज, बुटवल र नारायणगढ शाखा कार्यालयबाट पनि यो हकप्रदमा आवेदन दिन सकिनेछ । जेबिल्सको बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल हो ।